Mba tsy ho voafidy tsy nahy na kisendrasendra intsony… | NewsMada
Mba tsy ho voafidy tsy nahy na kisendrasendra intsony…
Hanao ahoana ihany izao fifidianana izao? Miseholany sahady ny kajikajy sy paipaika politika. Raha vitan’izay moa ka haninona? Misy, ohatra, ny lany henatra ka mandainga sy manamarin-tena imasom-bahoaka: tsy hirotsa-kofidina indray, hono, fa tsy mahafeno fepetra. Manao kitsapatsapa izany? Na te hiseho sy te hoderaina…
Tsy mba nojerena ahay aloha ny fepetra vao mitonon-tena fa mandeha an-jambany. Manao adivarotry ny manano tena, raikitra vao toran-kovitra. Hay tsy misy mpanohana, tsy manana ny enti-mihetsika! Izany no hitondra firenena? Tsy tena vonona, tsy mahalala izay atao sy miandry azy, mitsapatsapa, miteniteny fahatany…
Ao indray ny efa nilaza fa hirotsa-kofidina, nefa kivy ambony ihany na efa naman’ny mitsara tena fa tsy ho tafavoaka. Vokany, mitady sy miandry tambiny amin’izay hoe kandidà hafa hotohanana. Amin’izany, toy ny hoe manana mpomba na vahoaka iny izy: saika hirotsaka, hono, fa nitakemotra ka homena an’iza ny vato?
Tsy mifankaiza amin’izay koa ireo mody mirotsa-kofidina na tena mirotsaka. Efa mahalala tena fa tsy ho voafidy eo tsinona? Na mitetika toerana hafa… Mitifi-danitra, sitrany ahay mahavoa tendrombohitra. Miara-dalana amin’izany ny fahazoam-bola atsy sy aroa ka ny ampahany ihany no ampiasaina hoe efa nanao.
Zo ny mirotsa-kofidina, tsy misy azo sakanana amin’izany. Saingy mba fantapantatra mialoha ihany izay ho zavatra. Efa niomana ela, ohatra, mba nanana ny lalana nodiaviny eo amin’ny sehatra politika sy ny raharaham-pirenena. Eo koa ny fananana foto-kevitra mazava, fandaharanasa azo tanterahina, olona mpanohana…
Amin’izany, fandresen-dahatra no atao amin’ny mpifidy, ary fampitahana fandaharanasa no atrehin’ny vahoaka. Fa tsy izao vao mivoaka miditra amin’ny hoe hirotsa-kofidina sa tsia, iza no hanohana na hotohanana, hampitaha ny fandaharanasa izao na izatsy… Ny kitsapatsapa toy izany no mahatonga ny firenena toy izao?
Mba tsy hisy intsony ny tonga tsy nahy na kisendrasendra eo amin’ny fitondrana ka ho kitsapatsapa avokoa izay atao rehetra…